संसार तर्साउँदै नोवेल कोरोना भाइरस, कुन देशमा कति संक्रमित ? | देश परदेश Desh Paradesh
नेपाली मिति: ०४:५९:३५ बिहान २०७६ चैत्र २२ गते, शनिबार
संसार तर्साउँदै नोवेल कोरोना भाइरस, कुन देशमा कति संक्रमित ?
चीनबाट सुरु भएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा फैलिसकेको छ । नेपालमा हालसम्म एकजनामा कोरोना भाइरस देखिएपनि सो भाइरस पहिलो पटक फेला परेको चीनमा हालसम्म ८० हजार २६ जना संक्रमित भेटिएका छन् । २ हजार ९ सय १२ जनाको चीनमा सोही भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ ।
यसैगरी हंगकंगमा २ जनाको मृत्यु भएको छ भनें ९८ जना संक्रमित भेटिएका छन् । मकाउमा १० जना संक्रमित फेला परेका छन् । दक्षिण कोरियामा २६ जनाको मृत्यु भएको छ भनें ४ हजार ३ सय ३५ जनामा संक्रमण फेला परेको छ ।
ईटालीमा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ भनें १ हजार ६ सय ९४ संक्रमित फेला परेका छन् । ईरानमा ६६ जनाको मृत्यु भएको छ भनें १ हजार ५ सय १ जना संक्रमित छन् ।
जापानमा १२ जनाको मृृत्यु भएको छ भनें ९ सय ६१ संक्रमित फेला परेका छन् । यसमध्ये ७ सय ५ जना डाइमण्ड क्रुजमा यात्रा गरिरहेकाहरु रहेका थिए । सो जहाजलाई जापानले क्वारेण्टाइनमा राखेको थियो ।
फ्रान्समा २ जनाको मृत्यु भएको छ, १ सय ३० संक्रमित फेला परेका छन् । जर्मनीमा १ सय ३० संक्रमित फेला परे । सिंगापुरमा १ सय ६ जना संक्रमित फेला परे भनें अमेरिकामा २ जनाको मृत्यु भएको छ भनें ८० जना संक्रमित फेला परेका छन् । यसैगरी स्पेनमा ७१, कुवेतमा ५६, बहराइनमा ४७ जना संक्रमित फेला परेका हुन् ।
थाइल्याण्डमा १ जनाको मृत्यु भएको छ भनें ४३ जनामा संक्रमण पाइएको छ । ताइवानमा १ जनाको मृत्यु भयो भनें ४१ जनामा संक्रमण भेटिएको छ । बेलायतमा १ जनाको मृत्यु तथा ३५ जनामा संक्रमण भेटियो भनें मलेशियामा २९ जनामा संक्रमण फेला परेको छ ।
अष्ट्रेलियामा १ जनाको मृत्यु भयो भनें २४ जनामा संक्रमण देखियो भनें क्यानाडा तथा स्वीजरल्याण्डमा २४ २४ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
युएईमा २१ जनामा संक्रमण देखिएको छ भनें ओमानमा ६ जना, भारतमा ५ जना, पाकिस्तानमा ४ जना, कतारमा ३ जनामा कोरोना भाइरस फेला परेको एसोशिएटेड प्रेसले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् दूतावासको अनुरोधः पिकनिक, कार्यक्रम नगर्नु, विदामा भिडभाडमा नजानु
चारजना नेपालीलाई तीन महिना जेल वा जनही १ हजार रिंगिट जरिवाना
महामारी, आप्रवासी श्रमिक र गर्नुपर्ने काम
श्रमिकको तलव कटौती हुन्नः कतार
कतारमा श्रमिकका लागि हटलाइन सुरु, छुट्टीमा कतार बाहिर रहेकाहरुको आवासिय अनुमति पत्र स्वतः नविकरण हुने
कोरोना विरुद्दको खोप परिक्षणका लागि तयार
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं ३ चैत्र २०७६, सोमबार
कोरोनाका आधा भन्दा धेरै विरामी निको भए
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार
चीनमा घटे कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार